Ubuntu inosiya Convergence uye Kubatana inofarira Gnome | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwezuro, muvambi weUbuntu, Mark Shuttleworth, akazivisa kuburikidza neiyo Ubuntu blog, kusiiwa kwe Kubatana sedesktop huru yekuparadzira Ubuntu. Saka Ubuntu 18.04 ichave iine Gnome sedesktop huru.
Uye zvakare, pamwe nekusiiwa uku, Ubuntu neCanonical vanosiya kuvandudzwa kweVanozivikanwa Convergence, chiitiko chakakurukurwa zvakanyanya kwete chete neCanonical kana nezvikwata zvekuvandudza asiwo nemakambani akadai seApple kana Microsoft.
Kubatana 8 hakuchakwanise kusvika kune edu mafoni kana edu makomputa
Izvi zvinoreva kuti Ubuntu Runhare uye Ubuntu Kubata kumisa kugadziridzwa kana zvirinani zvinoita saizvozvo, seimwe yemahofisi makuru emapurojekiti aya kuunza Ubuntu Convergence kupedzisa vashandisi. Chii chimwe, Kubatana ndiko kwaive desktop huru yeUbuntu RunhareNaizvozvo, sezvo isina desktop iyi, hazviite kuti pave neshanduro nyowani kana zvirinani zvinoita sekudaro maererano nemazwi akanyorwa nemuvambi weUbuntu.
Uyu nhau Chave chiri bhogi chaiyo nekuti icho chinhu chisina kana munhu aitarisira. Kubatana 8 uye kusimudzira kweMIR kwainonoka asi zvaiita sekuenderera mberi. Kune rimwe divi, iyo Ubuntu Convergence yaive zvakare iri munzira uye chete kushomeka kwemidziyo kunogumira mashandisiro ayo.
Zvisinei, Ubuntu IoT uye ubuntu Server inzvimbo mbiri dzinoenderera kumberi uye kuti ivo vanounza akanakisa eiyi yemahara software kune mapurojekiti senge robhoti kana IoT matekinoroji. Idzi nzvimbo dzicharamba dzichishandiswa neCanonical. Izvi zvinoreva kuti isu tichaona yakawanda yemahara software inoenderana nenyika gore uye iyo IoT nyika sezvo Ubuntu mauto achatarisa kunzvimbo idzi uye asisiri pakukudziridza Unity 8 kana kubata Convergence.
Tichafanira kuona chaizvo maitiro evashandisi veUbuntu kuiyi nhau, asi zvirokwazvo ivo vashandisi venhare neUbuntu havazove vakafara kwazvo uye kunyangwe vashoma vavaki Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu inosiya Convergence uye Kubatana inofarira Gnome
Ugh imwezve runyararo kubva kuCanonical. Ini ndinofunga kuti tsvagiridzo yakanaka kwazvo asi iwe unofanirwa kunyatso kujekesa nezve zvinhu zvekuzvimisikidza, semuenzaniso zvakaitika neUbuntu TV kana Ubuntu One. Pasina kuenda kumberi ini ndakarasa dhata rangu rese nekuda kweiri nyore iyo nzira iyo Ubuntu iyo yakapihwa kurodha pasi mafaera aive muUbuntu One haana kundishandira. Sezvaunotaura, vashandisi veUbuntu Runhare havazofare. Uku kumonyoroka, hongu, kunobatsira vazhinji kudzoka, kana kudzoka, kuUbuntu uye kwandiri zvaisave nekuti ini ndaisada Kubatana, ndinofanira kunge ndiri mumwe wevashoma, asi nekuti laptop yangu, sekuru varombo, havana kukwanisa kuidhonza. . Zvisinei, ngativimbei kuti zviri nani. Chinyorwa chakanaka. Shuwiro yakanakisa.
Zvinondirwadza ini pachangu, semushandisi weUbuntu uye Kubatana kuona zvese zviri kuitika. Ngatione izvozvi desktop yandinosarudza, nekuti Gnome 3 haina kunyatsondikurudzira.
asi chero munhu akati gnome yakanga yakareruka, ichave iri gnome shell senge ubuntu-gnome.
Pindura kune lukas
Daniel Medina akadaro
Edza KDE Neon! Tarisa mavhidhiyo pane youtube, iyi ye10.
Pindura kuna Daniel Medina
Ndine urombo neCanonical, ndomumwe wevabatsiri vakuru nhasi, asi ndinofunga zvakakanganisa zvikuru nekumanikidza Kubatana kuve nharaunda yekutanga. Kunyanya, ndakaipa mikana yakawanda, ingangoita imwe pavhezheni, uye ini handina kumboiwana, pane kudaro, ini handione yakawanda pfungwa kunze kwekubata skrini. Ini handidi Gnome futi, ndinoreurura kuti ini ndiri wepamusoro weyakajairika desktop uye ikozvino ndinozvireurura pachangu mushandisi weCinnamon uye munguva pfupi yapfuura ndiri kutarisa kubvunza kuMate.
Chero zvazvingaitika ndinovimba kuti Kubatana kunoramba kuri sesarudzo, kune vazhinji vashandisi vanozvifarira uye zvingave zvinonyadzisa kana basa rese rakaitwa rakarasika.
San Juan akadaro
Zvinonyadzisa zvakadii, mune yangu nyaya ini ndaigara ndichifarira Kubatana, kunyangwe pandaive fan of KDE naPlasma. uye ini ndaitarisira rimwe zuva kuti ndiwane mbiri ine nharembozha ine Ubuntu Runhare. asi zvinoita sekunge handizove nemufaro iwoyo. Ini ndinotaura zvakafanana neleilllo1975 kubva kuGnome3, hazviite kuti ndigone kufarira gnome2 (mate)
Pindura San Juan
Ini ndakasiyawo Ubuntu nekuda kweUbatana.
Zvinosetsa kuti kuisa mari muubuntu chimwe zviwanikwa zvavakakanda mukubatana pamwe nekubatana, vangadai vakave vekutanga kuve neUS-inotarisisa OS uye ikozvino yaizokwana zvakakwana nezano nyowani.
Handizive, ini handioni ivo vachikwanisa kumisikidza zvinangwa zvenguva refu, handizive kana ndichadzoka mushure mekunge ndaita zvakanaka ne linux mint mate ... (handidi Gnome goko kana)
Mushandisi weInternet2000 akadaro
Kusvika riini isu tichaenderera mberi nekuisa iyi marara pamachina edu ... Ubuntu is shit uye yakanaka, hapana chimwe chakafanana nemawindows kubva kune anogadzira maonero ... isu tinowana chero nhamba yeinoshamisa distros yekuisa pamachina edu, nezvose zvekupedzisira zve linux uye pasina zvikanganiso ... kusvika patinenge tichizotevera mhando iyo inongopa traspiez uye inongofarira kuve muMuslim we linux kana ichimukodzera.
Pindura kune internauta2000
Ini ndinofunga kune nzira dzekutaura pfungwa pasina kutuka. Kana iwe usingade Kubatana shandisa imwe nharaunda uye yakagadziriswa. Zvimwe zvese zvasara.
Ini ndashandisa Ubuntu zvakanyanya munguva yakapfuura (parizvino ndinoshandisa kuyedzwa kweDebian) uye hazvingambopfuure pfungwa dzangu kuti ndidaidze 'marara', nekusiyana, ndinofunga ndiyo imwe yemahara emahara mashandiro ekunze kunze uko. Kwemakore mazhinji anga ari iye mutungamiri wekuita kuti kuvepo kwechinhu chinonzi Linux chizivikanwe pasirese uye akazviita nenzira inoshanda, nekuti kune makumi ezviuru zvevashandisi veGNU / Linux varipo vakasvika chaizvo kuburikidza neUbuntu. Kusaziva kukosha kweUbuntu ndeye mapenzi kana kufungira zvisizvo, vanhu vasingagone kuyera zvisina tsvete kuyera kukosha kana kukosha kwechimwe chinhu. Kana nhasi PASI rese rinotarisa Linux desktop masisitimu neruremekedzo uye nekuwedzera uye kuruzhinji kana masangano akazvimirira ega ari kusarudza mhinduro dzemahara, kwete zvishoma zvezvakakodzera zviri muBuntu.
Canonical's hit idrama yenharaunda yese. Asi ndichiona mhando yemavara ari chikamu che "nharaunda," ndave kutanga kufara mumakore enhamo ari pamberi peiyo Linux ecosystem. Muchidimbu, ungwaru hwakashoma sechakanaka sedzidzo. Zviri pachena.
Kubatana hakuna kumboita senge kunoshanda kwandiri. Iyo bhawa yekushandisa yainetsa, inononoka, haina kupa ruzivo rwakawanda. Yakanga isisina hunyanzvi hwekugadzira. Pafoni handina kuzomboona ramangwana, kunyanya nekuda kwekutsamwisa uye kushata bhawa.
Francisco Sanchez Tinao akadaro
Ini ndaive mushandisi we ubuntu uye kubuntu makore apfuura, ikozvino ini ndinoshandisa archlinux, zvakandibhadharira shanduko, asi parizvino ndiri kunamatira ne archlinux. Kubva zvandakagadza kusvika nhasi, angangoita makore mana, handina kurasikirwa nefaera kana data, handina kudzoreredza sisitimu, uye handina kana software yakaramba kushanda paPC yangu. Ubuntu yaive uye yakanaka, asi mukudzikama, kune zvirinani kugoverwa.
Pindura Francisco Sanchez Tineo
kubatana chinhu chinotyisa
Haisi chiyero chakakurumbira, asi chinoshandira kambani yakaita seCanonical, iyo isiri yakakura kwazvo uye inofanirwa kuwedzera mashandiro ezve kwayo zviwanikwa. Mako anoona, asi anofungawo zvega uye kunyangwe iye achifarira zano rekubatana zvakanyanya, anoziva kuti haasi kuzoita mari nemari nazvo… saka… bye rakanaka zano.
Iko chete kukanganisa iko kushandisa nguva yakawandisa pamuedzo. Makore maviri angadai akave anopfuura zvakakwana. Ini ndakaregerera zvitanhatu kana kudarika zvekubatanidzwa. Ubuntu hwakakura uye Kubatana kwakandiwanisa kuti ndizive zvakawanda Ubuntu distros uye zvinwiwa uye zvaisambofa zvakasununguka kana kupenya. Ubuntu zvakajairika zvakaitira nzanga uye zvakakwanisa kuunza Linux kumugumo mutengi.